Ndiyithengisa njani ipropathi yam / ipropathi yenyani eIndiya ngelixa ndiseNew York / New Jersey / e-USA? - I-NJ kunye ne-NY yeNdawo yeZindlu kunye nokuThengiswa, ukuKhuselwa kwaBantu abaKhuselayo kunye namaGqwetha okubhunga
ikhaya / Blog / Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew York / Ndiyithengisa njani ipropathi yam / ipropathi yenyani eIndiya ngelixa ndiseNew York / New Jersey / e-USA?
Disemba 2, 2019 Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew YorkUshiye uluvoI-Veer Patel
EIndiya, intengiso yearhente yokuthenga izindlu ihlala ijongwa ngamehlo okrokrelayo. Kwaye kutheni kungenjalo, sihlala sifumana iindaba ezininzi zokuphuhlisa iindaba kunye nemisebenzi yobuqhetseba. Ke, kubaluleke kakhulu kuye nawuphi na umthengi ukuba azi ukuba athenge ntoni, ngokusemthethweni. Yeyiphi imiba yomthetho emele ingqalelo yomthengi; angakukhusela njani kutyalo-mali lwakhe?
Umnini wepropathi e-India unamalungelo amathathu asisiseko phezu kwepropathi, omenza "umnini ngokupheleleyo."
Ilungelo lokuba ngumnini okanye itayitile yepropathi.
Ilungelo elikhethekileyo lokuba nelungelo lokufumana kwaye lonwabele izibonelelo zepropathi leyo nangayiphi na indlela esemthethweni.
Ilungelo lokumosha ipropathi. Ngamanye amagama, umniniyo angahlulelana nepropathi kunye nokuba ufuna nini, kwaye ngendlela afuna ngayo ukwenza njalo ukuba sele ekwinkqubo yomthetho.
Inkqubo yezomthetho kunye neemeko zentengiso ziye zenza kwanzima ngakumbi kubanini beepropathi ukuthengisa iipropathi zabo. Ukulungiselela abanini abanjalo, apha kulandela inkqubo esisiseko yokuthengisa ipropathi ngokusemthethweni eIndiya.
Uqingqo-maxabiso olufanelekileyo: umthengisi unokuzivavanya ngokwakhe okanye athabathe indawo kumthombo wangaphandle njengearhente yearhente yokuthengisa okanye yokuqesha ixabiso, ukumisela ixabiso lentengiso yepropathi leyo.
Ukuzithengisa kuthelekiswa nokuqeshisa iarhente: umthengisi unokukhetha ukuthengisa ipropathi yedwa, okanye aqeshise umthengisi zindlu Abantu abathengisayo banokungabi nakho ulwazi malunga nentengiso kunye neenkqubo zomthetho ezichaphazelekayo xa kuthengiswa impahla. Ukuqesha iarhente yobuchule kwikhomishini encinci kuyacetyiswa.
Intengiso: umthengisi angabhengeza ipropathi yakhe kwiindlela ezahlukeneyo ezinjenge-intanethi, iicloud, iiphamflethi, igama lomlomo okanye ngomthengisi. Nje ukuba umthengi achongiwe, kuyacetyiswa ukuba enze umvavanyi wangasemva kumthengi ngokujonga ngokukhethekileyo amandla akhe emali kunye nokuthembeka.
Ukufumana imvume: umthengisi akufuneki afumane zatifikethi zokuphikisa (i-noc) kubaphathi abohlukeneyo njengoko kufuneka. Aba basemagunyeni mhlawumbi;
Ugunyaziwe onobuchule phantsi komthetho wokupheliswa kwendawo yedolophu
Naliphi na elinye igunya.
Emva koko indima yethu njengommeli / igqwetha liza kwinkqubo.
Elona nqanaba libaluleke kakhulu lamaxwebhu: -
Ukufika kade, kuye kwakho ukwanda kwinani leempikiswano ezinxulumene nepropathi eziziphumo ezisisiphumo sokunganeli okanye amaxwebhu angafanelekanga. Kuyimfuneko ke ukuba bobabini abathengi kunye nomthengisi banike ingqalelo efanelekileyo kumaxwebhu esivumelwano.
La maxwebhu alandelayo ayimfuneko ukulwa nembambano enxulumene nepropathi eIndiya:
Inika isabelo sokwabiwa kwepropathi kwigunya elifanelekileyo okanye kuluntu, kumthengi wokuqala.
Izenzo zangaphambili zokuthengisa:
Umthengisi kufuneka abe netayitile yasekuqaleni yokuthengisa evela kumnini (s) sangaphambili wepropathi. Kwenza ukuba kube nako ukulandela ubunini bepropathi. Ipropathi enamaxwebhu acacileyo kunye nesihloko sinokuyalela ixabiso eliphezulu kwimarike.
Isicwangciso esivunyiweyo sokwakha nesatifikethi sokuhlala esikhutshwe ngugunyaziwe ofanelekileyo. Umzekelo; kwi-Delhi enokuba dda okanye ndmc kuxhomekeke kwindawo yolawulo.
Obu bubungqina besihloko sasimahla. Ipropathi engenasiphazamiso iyalela ixabiso eliphezulu kwintengiso.
Isivumelwano sokuthengisa okanye isivumelwano: akuba amaxwebhu akhankanyiweyo sele egqityiwe, umthengisi wenza isivumelwano sokuthengiswa esenzela umthengi ngesivumelwano sesivumelwano sokuthengisa yonke imigaqo kunye neemeko ezidweliswe ngokufanelekileyo kwiphepha lesitampu. Emva kokugqitywa kwamaxwebhu, omabini amaqela atyikitya ukuthengisa aze abhalise okufanayo.
Iqela lethu lengcali ye Amagqwetha eIndiya ndingakunceda ngenkqubo nganye njengoko ichaziwe apha ngasentla njengoko iqela lethu linabameli, abavavanyi ababhalisiweyo, abarhwebi abaziwayo, ababhalisi beencwadi abanolwazi nabasebenzi ababhalisiweyo.
Uqasha njani uMmeli eIndiya.